HS:-Shirkii Garoowe oo ay ka soo baxday qodobo ay ku heshiiyeen
Posted by admin on February 18 2012 11:32:29
HS:-Shirkii Garoowe oo ay ka soo baxeen qodobo aan la heyn baarlamaankii laga ansaxin lahaa,Somali Parliament Rejects Garowe Principleswararka maanta Feb,18/2012
HS:- Shirkii maalmahan ka socday magaalada Garoowe ayaa ugu danbeyn laga soo saaray qodobo qabyo ah oo aysan u dhameyn Soomaalida oo dhan marka laga reebo saxiixayaashii Kampala Acord.
Shirkaan ayaa waxuu wax yar ka duwanaa kii hore kadib markii lagu casuumay wafti ka kala socday Hiiraan iyo Jubooyinka walow aysan talada iyo arimaha shirka wax shaqo ah ku laheyn oo ay ahaayeen goob joogaal kaliya mana jirin wax ay saxiixeen waayo qorshuhuba ma aheyn iney wax saxiixaan maadamaa aysanba shaqo ku laheyn shirkii hore.
Hadaba shirkaani ma yahay mid miro dhal ah hadiise qodobo ka soo baxeen ma loo baahan yahay inba shir loogu qabto Soomaalida dalka UK?
Xaqiiqadii In ay shirkaan qodobo ka soo baxaan amaba aan lagu kala kicin waxaa ka shaqeeyey Mahiga oo isagu ay arintaan u aheyd qandaraas ka mid ah qandaraasyadii uu horey dalka uga fushaday wakiilkii isaga ka horeyey oo dalka Soomaaliya ka tagay isagoo leh waxaan Soomaaliya u sameyeye 550 xildhibaan oo aan horey loo arag si ay uga dhax muuqdaan qabiilkasta ( Walad Abdalla).
Qodobada shirka in la saxiixo oo kaliya waxa ku baxay malaayiin dolar iyadoo maamuladii iyo ragii matelayey dowlada kumeel gaarka ah ee aan meel ku ogeyn baarlamankii iyaga doortay ay qaateen habenkii xaleyto ahaa. markii uu shirka soo gabo gaboobay ayaa waxaa horey ka wacay xogyahay QM midoobay Ambassador Mahiga maadaama uu aad uga wal walsan yahay shirka lagu qabanayo London, qudbadii Mahiga waxey aheyd sidan" waanu guuleysanay dhamaanteen markii aad saxiixdeen waxaan horey ka wacay Ban kiimoon wuuna farxay".
Hadaba waxa Ban Kiimoon iyo Mahiga farxad galiyey ee Garoowe ka soo baxay xili saq dhaxe ah ee aan Soomaalida wadanka ku nool qaarkood aysan u kala jecleyn shirka Garoowe ayaa u baahan in loo helo jawaab sax ah.
Marka laga soo tago farxada Mahiga qodobada laga soo saaray shirka xagee laga ansaxinayaa maadama la hareer maray baarlamankii soo doortay masuuliyiinta hada hor boodeysa ee ka socota TFGda?
Hadii Garoowe lagu heshiiyey maa la joojiyo shirka London ooba sida uu Mahiga sheegayo ay Soomaali heshiisay?Sikastaba Garoowe waxkasta oo ka soo baxa ma noqon doonaan kuwo ka shaqeyn doono meel ka baxsan deegaanka shirka lagu qabtay waayo shirkaasi ma aheyn shir quseeyey Soomaali oo dhan.
Hadaba qodobada laguheshiiyey shirak Garoowe hadaanusoo koobno waa sidan
Qodobada lagu heshiiyay waxaa ka mid ah in baarlamaanka soo socda lagu soo xulo qaab beeleed, islamarkaana doortaan madaxweyne, markaas kadibna madaxweynuhu soo magacaabo ra’iisulwasaare soo dhisa xukuumad.
Nidaamka maamulka dalka ayaa laysla gartay in laga dhigo Federal ku salaysan 18-kii gobol ee horay u jirey, iyadoo meesha laga saarayo gobollada beeluhu sameyteen kadib burburkii dalka.
Waxaa sidoo kale lagu heeshiyay in laga gudbo habka kumeel gaarka ee loo gudbo dowlad caadi ah oo aan kumeel gaar aheyn kadib bisha August ee soo socota.
Sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha la isku afgartay in Soomaaliya yeelato labo aqal oo kala ah mid hoose oo ka kooban 225 mudane iyo mid sare oo ka kooban 54 xubnood.
Golaha sare ee ka kooban 54-ta xubnood ayaa lagu heshiiyay in 18-ka gobol ee dalka Soomaaliya gobolkiiba 3 xubnood ka yimaadaan.
Waxaa sidoo kale lagu heeshiiyay in dumarka laga siiyo baarlamaanka 30%, iyagoo markii hore heli jiray 25%, halka shirkii Garowe ee 1-aad loo qoondeeyay dumarka 20% laakiin haatan laga noqday oo laga dhigay 30%.
Waxaa sidoo kale lagu heshiiyay in dastuurka qabyada ah marka la dhameystiro ay ansixiyaan ergooyin gaaraya 1000 kuwaasoo laga soo xulay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ayna soo xulayaan labada Shariif iyo xulifadooda amaba hadan si kale u dhigno inta hada ka qeyb gashay shirka.
UGU danbeyn Ceebta ugu weyna waxey imaan doontaa baa la leeyahay marka la doono in la meel mariyo waxii lagu heshiiyey iyadoon la marsiin amaba laga ansaxin baarlamaanka hada jira oo ku hadla codka shacabka.